अर्काको लेख/रचना चोरि गरेर नाम कमाउने कोशीस नगरौ । – नेपाल डायरी डट कम
अप्रील 29, 2009 मे 3, 2009 by nepaldiary
अर्काको लेख/रचना चोरि गरेर नाम कमाउने कोशीस नगरौ ।
एमाले पार्टी होइन क्लब बन्दै छ
मेरो गत आईतवारको लेख एमाले पार्टी होइन क्लब बन्दै छ लाई उत्तम भट्टराई नाम का मुनुवा ले आफ्नो नाम राखी आज मंगलबारको कान्तिपुरमा पाठक-पत्र मा लेखेछन । अरुले मिहिनेत गरेर तयार गरेको लेख्/रचना लाई कम्सेकम पढे लेखेका , पाठक पत्र लेख्न जान्नेले ले त चोरि नगर्नु नि । अर्काको लेखलाई आफ्नो नाम राखेर अरुको स्रीजनाको फाईदा कसले नउठाउन ।
मेरो लेख आईतवारको पोस्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
आजको कान्तिपुरमा चोरेर लेखेको पाठक-पत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । ************************
कान्तिपुरमा छापिएको पाठक-पत्र
क्िलब हँुदैछ एमाले
प्रधानसेनापतिलाई स्पष्टीकरण लिएको विषयलाई लिएर दुईचिरामा विभाजित भएको एमालेले यसपटक पनि स्पष्टीकरण विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन । त्यसो त संकटको उचित निकासका लागि परेको समयमा ठोस निर्णय गर्न नसक्नु एमालेको ‘मौलिक सिद्धान्त’ नै भने हुन्छ, । कदाचित एमालेले निर्णय नै गर्‍यो भने पनि गोलमटोल भाषा, द्विअर्थी र अस्पष्ट विचार हुन्छ । त्यसै भनेको हो र एमालेलाई बसपार्कमा बस कुरेको यात्री भनेर ? नेता त धेरै छन्ा्, एमालेमा एक से एक नेता, खरा नेता, ज्ञानी नेता, पैसावाल नेता, वैचारिक नेता, पढैया नेता तर निर्णय गर्नसक्ने नेताको भने खडेरी छ । बुद्धि, विवेक, सोच, सिद्धान्त र राजनीतिक रूपमा नभई व्यक्तिगत फाइदाका लागि चलेको ‘क्लब’ भने हुन्छ एमालेलाई ।
केन्द्रीय कमिटीसम्म आइपुगेको सेनापति स्पष्टीकरण समयमै निर्णय गरेर तरल रूपमा रहेको राजनीतिलाई एउटा स्थिरता दिनसक्ने बल एमालेको कोर्टमा आएको छ । एमालेको ‘यस’ वा ‘नो’ ले यो विषय किनारा लगाउन सक्छ । तर एमाले न त आफू निर्णय गर्नसक्छ न त अरूले गरेको कामको मूल्यांकन नै । पिँध नभएको लोटा भनेर त्यसै भनिएको होइन रहेछ, नत्र खोइ जिम्मेवार व्यवहार देखाएको एमालेले ? केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी सार्ने, स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसक्ने, अनि कसलाई सार्ने जिम्मेवारी ? एमालेले आजको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाबाट निकास दिन के चाहिँ गर्ला ?
– उत्तम भट्टराई
Posted in नेपाल डायरीTagged एमाले,kantupur,pathak-patra
अघिल्लो क्या फसाद !!
अर्को कटवाल आउट